Mkpebi M Mere Mgbe M Bụ Nwatakịrị​—Inyere Ndị Kambodia Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Mgbe m bụ nwatakịrị
N’afọ 1985, ụmụaka si Kambodia gafetara n’ụlọ akwụkwọ anyị dị na Kolọmbọs, Ohayo, dị n’Amerịka. Adị m naanị afọ iri mgbe ahụ. Otu n’ime ụmụaka ahụ matụ asụsụ Bekee. Ọ malitere ise ihe, jiri ya na-akọrọ m otú e si mekpọọ ndị mmadụ ọnụ, otú e si gbuo ndị mmadụ, na otú ndị mmadụ si gbaa ọsọ ndụ. Akụkọ ndị ahụ na-awụ akpata oyi n’ahụ́. M na-ebe ákwá n’abalị ma m cheta ụmụaka ahụ. M chọrọ ịgwa ha gbasara Paradaịs na mbilite n’ọnwụ. Ma, ha anaghị anụ Bekee. N’agbanyeghị na m dị obere mgbe ahụ, m kpebiri ịmụ asụsụ Kambodian ka m nwee ike ịgwa ha gbasara Jehova. Amachaghị m na ihe a m kpebiri ime ga-emecha baara m uru.
Ịmụ asụsụ Kambodian siiri m ike. E nwere ugboro abụọ m kpebiri na agaghịzi m amụ ya. Ma, Jehova si n’aka papa m na mama m gbaa m ume. Ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ibe m mechara nyewe m nsogbu ka m nweta ọrụ ga na-enye m ezigbo ego. Ma, achọrọ m ịbụ ọsụ ụzọ. N’ihi ya, mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ekpebiri m ịmụ ihe ndị ga-enyere m aka inweta ọrụ na-agaghị ewekọrọ oge m niile. Ọ na-abụ, anyị gbasaa akwụkwọ, mụ esoro ụfọdụ ndị ọsụ ụzọ gaa ozi ọma. M wepụtakwara onwe m na-akụziri ụmụ akwụkwọ ibe m Bekee. Ihe ahụ m na-eme mechara baara m uru.
Mgbe m dị afọ iri na isii, anụrụ m na e nwere ụmụnna ole na ole na-eji asụsụ Kambodian amụ ihe n’ebe a na-akpọ Lọṅ Bich, dị na Kalịfọnịa, n’Amerịka. M gara ebe ahụ mụọ otú e si agụ Kambodian. Ozugbo m gachara ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m malitere ịsụ ụzọ, na-ezi ndị Kambodia bi n’akụkụ ụlọ anyị ozi ọma. Mgbe m dị afọ iri na asatọ, echewela m echiche ịga biri na Kambodia. N’oge ahụ, nsogbu ka dị n’obodo ahụ. Ma, ama m na ọtụtụ n’ime nde mmadụ iri bi na Kambodia anụbeghị ozi ọma. N’oge ahụ, ọ bụ naanị otu ọgbakọ ka e nwere n’obodo ahụ. Ndị nkwusa nọ na ya dị iri na atọ. Mgbe mbụ m gara Kambodia bụ mgbe m dị afọ iri na itoolu. Mgbe m dị afọ iri abụọ na otu, m kwagara ebe ahụ. Mgbe m ruru, m nwetara ọrụ na-agaghị ewekọrọ oge m, ya bụ, ọrụ nsụgharị na ịkụzi Bekee. M mechara lụọ otu nwanna nwaanyị kpebiri iji ndụ ya jeere Jehova ozi otú m kpebiri. Obi dị mụ na ya ụtọ na anyị enyerela ọtụtụ ndị Kambodia aka ha aghọọ Ndịàmà Jehova.
Jehova ‘enyela m ihe obi m na-arịọ.’ (Ọma 37:4) Ikwusa ozi ọma bụ ihe kacha eme obi ụtọ mmadụ nwere ike ịna-eme. Kemgbe afọ iri na isii m nọwara na Kambodia, ọ bụghịzi naanị ndị nkwusa iri na atọ ka e nwere. E nweziri ọgbakọ iri na abụọ na ìgwè nta anọ na-aghọbeghị ọgbakọ.—Akụkọ Jason Blackwell kọrọ.